MainWP: Si Dhexdaran U Maaree Meelahaaga WordPress | Martech Zone
Isniin, February 8, 2016 Talaado, Febraayo 9, 2016 Douglas Karr
Dadweynihii waaweynaa ee shirkadda 'Automattic' si dhow ayey iskugu dhafnaayeen maareynta WordPress iyada oo loo marayo Jetpack plugin. Horey ayaan hal arrin ugagalay, in kastoo, aan lumiyay wixii tagay oo dhan Jetpack Analytics markii barteydu si uun u go'day oo goob wax lagu diyaariyo lagu xiray halkii. Waxay ahayd wax aad u xun - waana ku faraxsanahay inaan haysto Google Analytics sidoo kale rakibay.
Haddii aadan rabin dhammaan qalabkaaga inay ku tiirsan yihiin hal madal oo weyn sida Jetpack, waxaa jira waxyaabo kale. Dhawaan, koox isticmaala isticmaaleyaasha WordPress ayaa ka wada hadlay MainWP. Sidoo kale, MainWP waxay qaadaysaa qaab ka duwan sida loo maamulo goobo badan - sida inay kuu suurta geliso inaad ka gudubto daabacaadda waxyaabaha isla markaana aad ku darto isticmaaleyaasha bogagga oo dhan.
MainWP waxay leedahay wax kabadan 100,000 oo rakibo waxayna sii wadaa inay ilaaliso qaab adag oo ah astaamaha aasaasiga ah ee bilaashka ah:
Maareyn Fudud - Dashboard-ka MainWP wuxuu ka qaadayaa dhibaatada maaraynta mawduucyadaada iyo waxyaabaha aad isku xirto. Waxaad isla markiiba dib u eegi kartaa mid ka mid ah boggagaaga WordPress ee laga heli karo cusbooneysiin laga helo hal meel dhexe. Hal guji kaliya ayaa cusbooneysiin doonta wax walba adiga.
Plugins Ka Tagid - MainWP wuxuu hubiyaa xaaladdii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay ee plugins-ka iyo mawduucyada wuxuuna kugu digayaa haddii aan lagu cusbooneysiin waqti cayiman. Tani waxay ku siineysaa aragti ku saabsan haddii qalab ama mawduuc laga yaabo inuu ka tagay qoraaga si aad u raadin karto qalab cusub oo casri ah.
Hal Guji Helitaan - Dashboard-kaaga MainWP waxaad ku iloobi kartaa inaad qorto URL kasta, galitaan iyo erey sir ah si aad ugu hesho boggaaga WP-Admin ee Ilmahaaga. Waxaan ka dhignay helitaanka dhammaan boggagaaga WordPress neecaw oo leh marin-u-helkeenna hal-guuritaan macquul ah. U gudub boggaga hoosaad-hoosaadka oo guji xiriiriyaha maamulka si aad u furto, isla markiiba waad soo gasho oo waxaad diyaar u tahay inaad maareyso. Looma baahna galitaanno iyo ereyo sir ah oo lumiya!
Hal Guji Casriyeyn - Dashboard-kaaga MainWP waxaad ku cusbooneysiin kartaa dhammaan boggagaaga adigoo gujinaya badhanka, ma jirto sabab dambe oo aad ku gasho mid kasta oo ka mid ah boggagaaga oo ka hubinaya cusbooneysiinta la heli karo. Waxa kale oo aad otomatigayn kartaa mawduuca ama cusbooneysiinta fiilooyinka (ama iska indho tiri).
Dib u habeyn lagu kalsoon yahay - U adeegso aaladdaada keydka ah ee MainWP Dashboard oo aad ugu raaxeysatid adeegyo tayo sare leh oo ah kaydinta dhammaan bogaggaaga WordPress. Xitaa waad dooran kartaa inaad ka saarto fayl gaar ah oo aan muhiim ahayn. Waxaad sidoo kale otomaatig ka dhigi kartaa keydkaaga waxaadna leedahay goobo kala duwan oo loogu talagalay goobo kala duwan iyadoo kuxiran baahiyahaaga.
content Management - ku daabacidda waxyaabaha ku jira bogagga hadda way fududahay sida ay noqon karto. Ka xusho bartaada liistada, qor nuxurka, oo daabac, adigoon dhib ku qabin inaad gasho goob kasta. Way fududahay in la maareeyo xiriiriyeyaasha, faallooyinka, iyo spam sidoo kale iyadoo la adeegsanayo daabacaaddeena ballaaran, tirtirka iyo howlaha spam.
Maareynta Isticmaalaha - Maareynta isticmaaleyaasha bogagga ilmahaaga hadda way fududahay sida ugu macquulsan. Waxaad si toos ah uga maamuli kartaa dhammaan isticmaaleyaashaada dhammaan boggagaaga MainWP Dashboard adiga oo aan u baahnayn inaad gasho mid kasta oo ka mid ah boggagaaga WordPress.
Is-martigelin - Khariidaddaada MainWP Dashboard-ka kuugu muhiimsan waa fiilo lagu marti-gelinayo adigu adigu ku rakib WordPress oo aan ku jirin server-yada gaarka loo leeyahay. Ma xafidno diiwaanada ficiladaada, Bogagga carruurta ama sida aad u isticmaaleysid qalabka.
Saxiix xubinimo waadna heli kartaa marin Xirmada ka timid MainWP, in kabadan 36 kordhinta caymiska oo kudaraysa awoodo adag oo aadan si fudud meel kale uga heli doonin. Hubinta isku xirka jaban, falanqaynta xawaaraha bogga, Analytics isdhexgalka, jadwalka boostada, maareynta dejinta jumlada, kormeerka waqtiga waqtiga, iyo xitaa socdaalka Blogvault.
Isku qor MainWP si bilaash ah!
Tags: keydinta wordpress iswadamaareynta ereyada dhexemainwpwordpress casriyeyn iswadakeydinta wordpressmaaraynta wordpresswordpress casriyayntawordpress casriyaynta mawduucacusbooneysiinta wordpress
Feb 9, 2016 markay ahayd 4:23 PM
Tani waa fikrad weyn. Sidee fiican ayey kuugu shaqaysaa adiga, Doug?
Febraayo 10, 2016 saacadu markay tahay 10: 51 AM
Waxaan kaliya xoojineynaa shabakad aan ku dhejineyno isticmaalka Whitney. Ilaa hadda, waxaan u isticmaalnay Maareynta WordPress Maareynta si aan u fashilinno qaar ka mid ah hawlgalladaas. Waan necbahay inaan ahaado wakaalad martigelinta iyo maaraynta maareynta maareynta goobta - Waxaan door bidi lahaa waxbadan inaan ku bixiyo martigaliyaha daryeela.